Jeremiya 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Judha anoputsa sungano yaakaita naMwari (1-17)
Vanamwari vakawanda semaguta (13)
Jeremiya anofananidzwa negwayana riri kuendeswa kunourayiwa (18-20)
Jeremiya anopikiswa nevarume vemuguta rake (21-23)
11 Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti: 2 “Inzwai mashoko esungano iyi imi vanhu! “Ataure* kuvarume veJudha nekuvagari vemuJerusarema 3 uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Munhu asingateereri mashoko esungano iyi ngaatukwe,+ 4 ayo andakarayira madzitateguru enyu pazuva randakaabudisa munyika yeIjipiti,+ muchoto chinonyungudutsirwa simbi,+ ndichiti, ‘Teererai inzwi rangu, uye itai zvinhu zvese zvandinokurayirai; muchava vanhu vangu uye ini ndichava Mwari wenyu,+ 5 kuti ndizadzise mhiko yandakapikira madzitateguru enyu, yekuti ndiape nyika inoyerera uchi nemukaka,+ sezvazviri nhasi.’”’” Ndakabva ndapindura kuti: “Ameni,* haiwa Jehovha.” 6 Jehovha akabva ati kwandiri: “Zivisa mashoko aya ese mumaguta eJudha nemumigwagwa yeJerusarema uchiti: ‘Inzwai, mashoko esungano iyi, muaite. 7 Nekuti ndakarayira zvakasimba madzitateguru enyu pazuva randakaabudisa munyika yeIjipiti kusvikira nhasi, ndichiarayira ndaarayirazve* ndichiti: “Teererai inzwi rangu.”+ 8 Asi havana kuteerera kana kurereka nzeve dzavo; mumwe nemumwe akatoramba achiomesa musoro achitevera mwoyo wake wakaipa.+ Saka ndakavaunzira mashoko ese esungano ino andakavarayira kuti vaite, asi vakaramba kuaita.’” 9 Jehovha akabva ati kwandiri: “Varume veJudha nevagari vemuJerusarema vari kufurirana kuita zvakaipa. 10 Vakadzokera kuzvikanganiso zvemadzitateguru avo ekare, ayo akaramba kuteerera mashoko angu.+ Naivowo vakatevera vamwe vanamwari, vakavashumira.+ Imba yaIsraeri neimba yaJudha dzakaputsa sungano yangu yandakaita nemadzitateguru avo.+ 11 Saka zvanzi naJehovha, ‘Onai ndiri kuunza dambudziko pavari,+ ravasingazogoni kutiza. Pavanoshevedzera kwandiri kuti ndivabatsire, handizovateereri.+ 12 Vanhu vemumaguta eJudha nevagari vemuJerusarema vachabva vaenda kuna vanamwari vavari kupa zvibayiro* vokumbira kuti vabatsirwe,+ asi havasi kuzombovaponesa panguva yedambudziko ravo. 13 Nekuti vanamwari vako vawanda semaguta ako, haiwa iwe Judha, uye wakavaka atari dzamwari anonyadzisa dzakawanda semigwagwa yeJerusarema, kuti upire zvibayiro kuna Bhaari.’+ 14 “Asi iwe* usanyengeterera vanhu ava. Usavachemera kwandiri kana kuvanyengeterera,+ nekuti handizoteereri pavachashevedzera kwandiri pamusoro pedambudziko ravo. 15 Mudiwa wangu ane kodzero yekuva mumba mangu here,Ipo paine vanhu vakawanda kudai vakaita zvinhu zvakaipa zvavakaruka? Vachaita kuti nyama tsvene* ivhariridze dambudziko parichauya pauri here? Uchapembera nemufaro panguva iyoyo here? 16 Jehovha aimbokushevedza kuti muorivhi wakasvibirira,Wakanaka uye une michero yakanaka. Nekutinhira kukuru, akautungidza nemoto,Uye vakatyora mapazi awo. 17 “Jehovha wemauto, Mudyari wako,+ azivisa kuti dambudziko richauya pauri nemhaka yezvakaipa zvakaitwa neimba yaIsraeri neimba yaJudha, idzo dzakandigumbura nekupa zvibayiro kuna Bhaari.”+ 18 Jehovha akandiudza kuti ndizive;Panguva iyoyo makaita kuti ndione zvavaiita. 19 Ndakanga ndakaita segwayana rakapfava riri kuendeswa kunourayiwa. Handina kuziva kuti vaindirongera vachiti:+ “Ngatiparadzei muti nemichero yawo,Uye ngatimubvisei panyika yevapenyu,Kuti zita rake risayeukwa zvakare.” 20 Asi Jehovha wemauto anotonga nekururama;Anoongorora pfungwa dzakadzama* uye mwoyo.+ Itai kuti ndione muchivatsiva,Nekuti ndakaisa nyaya yangu kwamuri. 21 Saka zvanzi naJehovha kuvarume vekuAnatoti+ vari kutsvaga kukuuraya* uye vari kuti: “Usaprofita uchishandisa zita raJehovha,+ kuti tirege kukuuraya”; 22 zvanzi naJehovha wemauto: “Ndichaita kuti vazvidavirire. Majaya achaurayiwa nebakatwa+ uye vanakomana vavo nevanasikana vavo vachafa nenzara.+ 23 Hapana kunyange nevashoma vachasara pakati pavo, nekuti ndichaunza dambudziko pavarume vekuAnatoti,+ gore ravachaitwa kuti vazvidavirire.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva Jeremiya.
^ ChiHeb., “ndichimukira mangwanani ndichiarayira.”
^ Kana kuti “kukwidzira utsi hwezvibayiro.”
^ Kureva, Jeremiya.
^ Kureva, zvibayiro zvaipiwa mutemberi.
^ Kana kuti “kutsvaga mweya wako.”